-थाहा पाउनुहोस् , यौन ईच्छा दबाउँदा यस्तोसम्म हुनसक्छ – PostKathmandu
-थाहा पाउनुहोस् , यौन ईच्छा दबाउँदा यस्तोसम्म हुनसक्छ
February 16, 2018 by PostKathmandu
अर्को कुरा सम्भोगपछि पनि एक अर्काप्रति माया व्यक्त गर्नुपर्छ । यौन साथी सन्तुष्ट भए नभएको बुझ्नुपर्छ । पुरुषले चरम आनन्द लिँदैमा सम्भोग क्रिया पूर्ण भयो भन्ने सोच्नु ठिक हुँदैन । सामान्यतया महिलाहरुलाई पुरुषको तुलनामा ढिलो यौन सन्तुष्टी हुनेगर्दछ ।साभारwww.zoompati.com
Prevसेक्स पावर बढाउने भियग्रा कस्तो औषधि ? यसको सेवनले कुनै हानीहुन्छ कि हुँदैन ?
Nextभाग्य कसले देखेको हुन्छ र कतै तपाईंको भाग्यमा पनि राजयोग पो छ कि ? जान्नुहोस राजयोग बारे